Ahoana ny fomba fanaovana haingon-trano Krismasy tsara tarehy | Asa tanana
Fomba fanamboarana firavaka krismasy mahafinaritra
Irene Gil | | Decor, asa-tanana, Asa tanana krismasy, Fotoana manokana
Ao amin'io tutorial Ampianariko ianao hanao haingo krismasy kanto, miaraka amin'ny fomba nordika izay tena lamaody ary fikasihana volamena tena malefaka izay mijery tsara foana amin'ireo daty ireo.
Mba hanaovana ny haingo krismasy kanto mila izao manaraka izao ianao fitaovana:
Hamorona ny haingo krismasy kanto tsy maintsy manomboka aloha ianao malama ny tanimanga. Ahodino ao mandra-pahazoanao ravina iray tokony ho 5 milimetatra ny hateviny.
Rehefa manana ny tanimanga tena malama ianao dia asio marika miaraka aminy ny texturizers. Mila apetrakao amin'ny sisin'ny tanimanga fotsiny izy ireo ary ahodinkodina eo amboniny. Homarihina ny firafitra.
Hetezo miaraka amin'ny mpikapa cookie. Apetaho amin'ny tanimanga izany mba ao anaty faribolana ny antsasaky ny firafitra sy ny antsasaky ny malama. Press and release.
Miaraka amin'ny paompy nify azonao atao ny manao azy ny lozoka hiditra ny jute tady ary mahay manantona ny firavaka.
Hanome azy ireo ny fikasihana volamena raiso ny loko metaly volamena ary atsobohy ao aminy ny rantsantananao. Manosotra Rantsan-tànana kely eo anelanelan'ny tsirairay mba hiparitahan'ny loko eo amin'izy ireo ary amin'izany dia esory ny mihoatra. Tsy tokony hisy sisa tavela satria raha tsy izany dia hiditra amin'ny lavaky ny firakofana izy ireo, ary ny tadiavinay dia ny hijanonany fotsiny ary ny fotsy dia mbola fotsy. Atsofohy moramora amin'ny volon-tanety ny rantsan-tananao.
Araka ny hitanao dia azonao atao izany fahasamihafana samy hafa. Arakaraka ny itiavanao loko amin'ny rantsan-tananao no hamafin'ny hue volamena.
Rehefa maina ny loko dia azonao afatotra ny jute tady, ary ho vonona hanantona ny haingon-tranoo.
Ary ity no vokatra. Apetraho eo amin'ny hazo krismasy, eo am-baravarana, eo amin'ny fehiloha, eo am-baravarankely ...
Ary raha te-hanao hazo krismasy anao ianao dia aza hadino ireto hevitra ireto:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Fomba fanamboarana firavaka krismasy mahafinaritra
Eva anjely rubber mandoko ny hazo krismasyo